Ukuphupha ngokubola Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuba sichaza isakhiwo njengesidlakadlaka, oku kuthetha ukuba akusenakwenzeka ukusebenzisa okanye ukujonga ipropathi ngokukhuselekileyo ngenxa yesakhiwo esonakeleyo okanye esibolileyo, nanjengoko kukho umngcipheko omkhulu wokuwa. Kwiimeko ezininzi, yonke indlu ifuna ukulungiswa ngokupheleleyo. Kuqhelekile ukuba ukonakala kuhambele phambili kangangokuba ipropathi ijongeka ngathi yinkangala kwaye ekuphela kwento onokuyenza kukudiliza nokwakha kwakhona eso sakhiwo.
Inkunkuma inokuba ngumxholo wamaphupha ethu. Indlela okuzibonakalisa ngayo inokwahluka kakhulu, njengoko ukutolikwa kwamaphupha kusetyenziswa le mizekelo ilandelayo kubonisa.
1 Uphawu lwephupha «ukonakala» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukonakala» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuchitha» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukonakala» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umfanekiso "ophuphayo" ngowona mxholo uphambili wamaphupha ethu, ngokwembono yeetoliki zamaphupha ngokubanzi, kuhlala kukho ukungoneliseki kwaye kuyazimela emva kwawo. ukuphazamiseka kubomi bokwenyani
Isakhiwo sikwabonakala ekutolikeni amaphupha njengomboniso wokwakhiwa kobomi buqu. Ukuba oku kungangxengwanga, kusenokubakho umva kakhulu emva kwayo. utshintsho ngendlela yakho yobomi.
Ukuba iinxalenye zendlu ziyawa kwimeko yamaphupha, oku kulumkisa iphupha lelishwa kwaye ukungoneliseki. Ngokwamntu, umntu makazame ukukhumbula ukuba yayiyintoni na isakhiwo:
Ngaba yayiyicawa, inqaba, ivenkile yesebe, okanye ikhaya lakho? Kunokuba luncedo kakhulu ekulaleni ukuvumela imiba yezi mpawu zamaphupha ukuba zingene kuhlalutyo lokulala ukuze unxibelelwano oluchane ngakumbi el mundo yamaphupha kunye nokuvuka.
Uphawu lwephupha «ukonakala» - ukutolikwa kwengqondo
Umfanekiso wephupha "lokuchitha" unokunika imikhondo malunga nobomi bomphefumlo bomntu ophuphayo. Umzekelo, ukuba skyscraper asilungiswanga, oku kunokuba luphawu lwe Ukugqithisa ukubakho, okubangela imo yengozi kunye nosongelo ephupheni. Usenokuba ujongene neengxaki ezikhoyo kunye nezicwangciso onqwenela ukuziphumeza. Nangona kunjalo, okwangoku ayinalo uzinzo olwaneleyo koku.
Kuya kufuneka uyiqonde le meko yamaphupha njengesilumkiso sokungangxami. Kubalulekile ukwenza isiseko esiluqilima kwangaphambili, ukuzikhusela kwaye uhlale unesicwangciso B esilungile.
Ukuba kukho abantu abonakele kwipropathi kwaye uzama ukubasindisa ngaphambi kokuba yonke into iwe, oku kukhomba kutoliko lwengqondo ngephupha libe luncedo kwaye ubuntu obunomdla ngaphantsi. Umntu ophuphayo ubona iinkxalabo kunye neemfuno zabanye abantu ngovakalelo olukhulu.
Nangona olu luphawu olubaluleke kakhulu, umntu ekuthethwa ngaye uhlala ehamba peligroUkoyisa imida yakho. Oku kubonisiwe kuye ngokuzama ukuhlangula ephupheni. Ukugcina abanye yeyona nto iphambili kuwe ngoku.
Nangona kunjalo, inyani yokuba uzibeka emngciphekweni ayibonakali ngathi iyazi okanye ayibalulekanga ngeli xesha. Kubomi bokwenyani, oku kunokuthetha ukuba ngaphandle kokuzimisela ukunceda, kuya kufuneka uqiniseke ngokuzikhathalela. Qhubeka ube ngumntu onokumthemba. Kodwa hlala unyanisekile kuwe, kuba kuhlala kukho abantu abangabakho Uxinzelelo Ndifuna ukuqhuma ngokungacacanga.
Uphawu lwephupha «ukuchitha» - ukutolika kokomoya
Ekuchazeni amaphupha okomoya, ubonakalisiwe ngamaphupha. ubu ethe-ethe umphefumlo womntu.